Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ United States Nwa akwukwo Christian Pulisic Story Plus ihe omuma ihe omuma
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye kasị mara aha "Captain America“. Anyị Christian Pulisic Child Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge. Nyocha a metụtara ezinụlọ ya, akụkọ ndụ tupu ama ama, ebili na akụkọ a ma ama, mmekọrịta na ndụ onwe onye.
Ee, onye ọ bụla maara ọ bụ otu n'ime ndị egwuregwu bọọlụ kacha mma USA mepụtara. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle akwụkwọ akụkọ Christian Pulisic nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Christian Pulisic Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Ihe Ndị Bụ Eziokwu- Ndụ mbido na nzụlite ezinụlọ
Malite na, Di na nwunye di na nwunye a mụrụ na 18th ụbọchị Septemba 1998 na Hershey na Pennsylvania, USA. Amuru ya nne ya Kelley Pulisic na nna ya Mark Pulisic. Ndị nne na nna ahụ bụ ndị di na nwunye hụrụ egwuregwu n'anya bụ ndị gbara bọọlụ kọleji Mahadum George Mason.
Pulisic na-eto eto tolitere na Pennsylvania na-enwe mmekọrịta ịhụnanya nke nne na nna ya na nwanne ya nwanyị bụ DeeDee na nwanne nwanne nwoke nke amachaghị banyere ya. Pulisic nwere mmasị n'ịgba bọl dịka nwatakịrị, egwuregwu nke na-abịakwute ya n'emeghị ka a gwa ya ka ọ were ya dị ka egwuregwu ụmụaka. N'ezie, nna Pulisic na-echeta na ọ gbalịrị ịdọpụ nwa ya nwoke na football ka ọ wee nwee ike ijide n'aka na mmasị ụmụaka na egwuregwu ahụ bụ nke aka ya.
“Ọ fọrọ nke nta ka anyị kpalie ya n'ụzọ ndị ọzọ na-abụghị bọl. A manyeghị ya n'ụzọ ọ bụla. Achọrọ m ijide n'aka na ọ na-eme mkpebi ahụ. Ihe anaghị arụ ọrụ ma ọ bụrụ na ị na-amanye ọzụzụ na ụmụaka. ”
Ihe edere Mark Pulisic na nwa ya nwoke nwere mmasị na football.
Prohụnanya nke football nke football nwere gbagoro na 2005 mgbe enyere nne ya Kelly ohere ịga rụọ ọrụ na mba ofesi na mmemme mgbanwe nkuzi na England maka otu afọ. Mmepe ahụ hụrụ Pulisic sonyere nne na nna ya ịhapụ mba Bekee ebe ọ malitere igwu egwuregwu bọọlụ.
Christian Pulisic Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Ihe Ndị Bụ Eziokwu- Ụlọ Ọrụ Na-arụ ọrụ
Mgbe Pulisic na ndị mụrụ ya rutere England, ha biri na Tackley, obodo mara mma, dị jụụ nke dị kilomita ole na ole n'ebe ugwu Oxford. Mgbe ọ nọ na Tackey, nna Pulisic egbughị oge idebanye aha 6 dị na nwata na ntọala nke obodo Brackley, nke bụ 18.0 kilomita (30 nkeji ụgbọala) site na obodo.
Ọ bụ na obodo Brackley na Pulisic nwere uto mbụ ya maka ịsọ asọmpi maka otu afọ, na-egwu mgbe ọ bụla ohere na-enye ya n'ụlọ akwụkwọ, tupu ụlọ akwụkwọ, mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ, na ndị otu ya na asọmpi obodo, na ngwụsị izu na ndị mụrụ ya na ogige ntụrụndụ dị iche iche na ebe egwuregwu na-atọ ndị mụrụ ya ụtọ.
Christian Pulisic Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Ihe Ndị Bụ Eziokwu- Ụzọ Iji Mara Aha
Mmadụ atọ ahụ laghachiri America wee biri na Michigan na-esochi ngwụsị nke nne Pulisic na-akụzi usoro mgbanwe. Otú ọ dị, enweghị njedebe maka agụụ nke nwatakịrị ahụ ka o si n'ebe ọ kwụsịrị na England site na igwu egwu maka Michigan Rush. Ya na klọb ahụ ruo ọnwa ole na ole tupu ezinụlọ ya akwaga n'obodo Pennsylvania.
Oge ahụ akara oge ndị nne na nna Pulisic mere ka nwa ha nwoke nwee ọrụ ịgba bọọlụ nke kachasị mkpa site na ịdenye ya na otu ndị otu US Soccer Development Academy, PA Classics. Pulisic nọrọ afọ asaa na klọb na-egwu egwu megide ụmụaka ndị tọrọ ya. Ọtụtụ afọ ka e mesịrị Pulisic na-aga nke ọma ga-achọpụta na ọ ga-eme nke ọma na PA Classics site na iji ike ikwenye onwe ya
"Mgbe m bụ obere ihe ọkpụkpọ, enweghị m ike iji nkà m ... M ga-emerịrị ha n'uche m."
N'ikwu ya, ọ bụ na PA klas na Pulisic tọrọ ntọala nke àgwà ndị e ji mara ụdị egwuregwu ya.
Christian Pulisic Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Ihe Ndị Bụ Eziokwu- Bilie Iji Mara Aha
2014 bụ afọ na-eme ememe maka Pulisic bụ onye ndị dike Germany bụ Borussia Dortmund hụrụ na kpakpando na-arịwanye elu. Ntughari ya site na United States na European Country Germany enweghị ihe mgbochi n'ihi na o nwere ụmụ amaala nke US na Croatia (nakwa na Europe). Akwukwo nke putara na nwa akwukwo nke ndi obodo nke Kraist bu onye nadigh nma nke nna ya bu Croatian, bu Mate, onye Pulisic natara aha ya.
N'ịkọwa njem ya site na PA Classics na Borussia Dortmund, nwa amaala na-enwe nchekwube ka ọ na-ekwu na ọ dị njikere maka ụwa ọhụrụ obi ike;
"M dị njikere maka ihe ịma aka ọhụrụ a. Ọ ga-esi ike, ma echere m na m ga-eme ya. "
Ekwenyere okwu ya Pulisic edekọwo ọganihu dị egwu kemgbe ọ bịanyere aka na Dortmund na February 2015 ma mee mmalite ya maka ụlọ ọrụ n'oge mmeri 2-0 megide FC Ingolstadt na 30th nke January 2016.
Ruo ugbu a, nwee ọganihu site n'ọkwá, merie ihe mgbaru ọsọ na n'ọtụtụ oge ghọrọ onye ọkpụkpọ America nke ọdụdụ ka ọ dezie ma debe ihe ndekọ. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Christian Pulisic Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Ihe Ndị Bụ Eziokwu- Ndụ mmekọrịta
N'isochi nwatakiri na-eto eto, ajụjụ a na-ekwu banyere onye ọ bụla bụ… Onye bụ enyi nwanyị Christian Pulisic ma ọ bụ wag?.
Agaghị agọnahụ eziokwu ahụ bụ na onye America dị nro nke nwere ọdịnihu dị mma n'ọdịnihu na-egbu ụmụ nwanyị dị ka nwoke mara mma. Otú ọ dị, Pulisic ka na-alụbeghị di ma ọ bụ na-elekwasị anya n'ịrụ ọrụ ya n'ọtụtụ dị elu.
Christian Pulisic Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Ihe Ndị Bụ Eziokwu- Ndụ Ezinụlọ
Pulisic nwere ezinụlọ nke na-eme ka ọ bụrụ ihe ọ bụla ọ ga-achọ ịghara inwe enyi nwanyị. anyị na-ewetara gị nkọwa gbasara egwuregwu ya na-ahụ n'anya ezinụlọ.
Banyere Nna Pulisic: A mụrụ nna Pulisic Mark Pulisic na 20th nke September 1968. ọ gbara bọọlụ kọleji na Mahadum George Mason n'etiti 1986 ruo 1989 na-ede ihe mgbaru ọsọ iri atọ na ise na 73 anya. Ọ bụ n'oge nke ọkwa a ọkachamara nchịkwa na Pittsburgh Riverhounds. Mark nwere nkekọ pụrụ iche na nwa ya nwoke onye ọ na-eduzi ruo ụbọchị.
Banyere Pulisic Mama: Kelly Pulisic bụ nwanyị na - abụghị naanị zụlitere nwa ya nwoke ka ọ bụrụ onye egwu pụrụ iche kama kụziiri ya ihe nkuzi site na Soccer, egwuregwu ọ na - egwuri egwu na Mahadum George Mason na 1980s. Ọ bụ na mahadum ka ọ zutere wee bido iso nna Pulisic, Mark.
Banyere Mmekọlọtọ Pulisic: Pulisic nwere nwanne nwanyị hụrụ n'anya nke a na-akpọ DeeDee. Onye ọkpụkpọ ahụ hụrụ ya n'anya ụlọ ọrụ ma kwụsị ịhapụ ya mgbe ọ na-anọghị n'ụlọ.
N'akuku nke ozo, o nwere ihe omuma nke onye amaraghi banyere ihe ozo karia eziokwu na o na-aputa ya na foto ndi ozo dika nke di n'okpuru.
Christian Pulisic Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Ihe Ndị Bụ Eziokwu- Endorsements
Pulisic dị naanị afọ iri abụọ mana ọ nwetaworị ọtụtụ nkwado nkwado nke gụnyere ụlọ ọrụ Chocolate na koko - Hershey, onye America na-emepụta ihe ọ beụ sportsụ egwuregwu na ihe oriri - Gatorade, ụlọ ọrụ ndị na - achịkọta egwuregwu - Panini-America na ụlọ ọrụ na - emepụta akpụkpọ ụkwụ - Nike .
ka ọ dị ugbu a, a na-atụ anya na a ga-enweta nkwado ndị ọzọ maka Pulisic dị ka North America ga-akwado 2026 Fifa World Cup.
Christian Pulisic Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Ihe Ndị Bụ Eziokwu- Ezigbo Ndụ Onye
Pulisic bụ onye na-ekwu okwu nro na onye kwere nkwa nke kachasị mma ka ga-abịa. Ọ bụ ezie na nwatakịrị nwere obi ike dị oke nzuzo, ọ nwere ọtụtụ ndị enyi ọ na - esoro mgbe ụfọdụ ma soro ndị otu ya nwee ezi mmekọrịta mmekọrịta. Ọ hụrụ ezinụlọ n'anya, ọ ga-abụrịrị na ọ ga - abụ ezigbo enyi enyi nwanyị ya ma ọ bụ nwunye ya mgbe akpabiri ya.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Akwụkwọ Ndị Kraịst anyị bụ Pulisic Child plus akụkọ na-adịghị mma. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kekọrịta anyị site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.
Bọchị gbanwee: Jenụwarị 19, 2021
Bọchị agbanwee: Ọktọba 10, 2020
Ifiedbọchị agbanwee: November 11, 2020
Bọchị agbanwee: Ọktọba 19, 2020
Ifiedbọchị agbanwee: November 5, 2020
Bọchị gbanwee: Jenụwarị 20, 2021